ओलीको धम्की : मन्त्रिमण्डल बनाउन नसक्नेले एमालेसँग लड्ने धाक लगाउने ?
जिल्ला अधिवेशनको तालिका हेरफेरले कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको महासंग्राम देशभर तातेको छ । जिल्लाका तल्लो तहसम्म अधिवेशनको रौनक बढेको छ । करिब चार लाख क्रियाशील सदस्य संख्या बढेर यसबर्ष आठ लाख नाघेसँगै कांग्रेसमा युवा पुस्ताको आकर्षण देखिएको छ ।
विजयकुमार गच्छदारको आक्रोश: सरकारको गुरुयोजना पेस गर्नु कसरी भ्रष्टाचार भयो ?
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफूलाई पूर्वाग्राही राखेर फसाएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आरोप पनि लगाए ।
सरकारले आगामी चैत्र मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाईसक्ने जनाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै आगामी चैत्र मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाईसक्ने बताएका हुन् ।
ओली सरकारले नियुक्त गरेको सबै राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको सबै मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।